The Ab Presents Nepal » गगन थापालाई जेल जाने चिन्ता, भीम रावल पनि फस्न सक्ने !
गगन थापालाई जेल जाने चिन्ता, भीम रावल पनि फस्न सक्ने !
काठमाडौं, मंसिर -: प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले आफू लगायत सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु जेल पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कास्कीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले केपी शर्मा ओली सरकारले आफू लगायत नेकपाकै नेता जेलभित्र हाल्नेगरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।यो कानुन मलाई मात्र लाग्ने होइन । कमरेड भीम रावलले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, उहाँ पनि भित्र जानुहुन्छ । कमरेड माधव नेपालले दुइ दिनअगाडि बोल्नुभएको छ, मन्त्रीहरुले पैसा लिएर सरुवा बढुवा गर्छन, अब उहाँ पनि भित्र जानुहुन्छ’, थापाले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने ।
थापाको सम्बोधनको पूर्णपाठः संसदमा एउटा कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । जसलाई सूचना प्रविधि कानुन भनिएको छ । हामीले बलजफ्ती रोकेका छौं । अब संसद खुल्ने वित्तिकै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । यो कानुनले के भन्छ? यो कानुनले भन्छ, तपाईहरु कसैले बेलुका गएर फेसबुक, ट्वीटरमा, बोलेर, कतिकतै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताको बारेमा एक शब्द लेख्नुभयो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली प्रहरी लिएर तपाइको घर आउँछ र भन्छ, तपाइले लेख्नुभएकोले हिरासतमा लिएर जान्छ । अनि तपाइलाई अदालतमा उभ्याउँछ । सरकारले छानेर तीन जनाको छुट्टै अदालत बनाउँछ । त्यो अदालतले भन्छ, तपाइले हिजो राती फेसबुकमा लेखेको कुराले प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत भएको हुँदा, मन्त्रीलाई हेप्नुभएको कारणले तपाइलाई ५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ, १५ लाख जरिवाना गरिएको छ ।
यो कानुन अब आउने संसदको बैठकबाट पारित हुँदैछ । यो कानुन मलाई मात्र लाग्ने होइन । म कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कमरेड भीम रावलले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, उहाँ भित्र जाने हो । कमरेड माधव नेपालले दुइ दिनअगाडि बोल्नुभएको छ, मन्त्रीहरुले पैसा लिएर सरुवाबढुवा गर्छन, अब उहाँ पनि भित्र जाने हो ।अब यो देशमा त्यो मान्छे मात्र बोल्न पाउने छ जसले भन्ने छः श्री ६ बडामहारानी विद्यादेवी भण्डारीकी जय, श्री ५ केपी ओलीकी जय, श्री ३ महाराज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी जय भन्ने बाच्नेछन् । तीन जनाको जय बच्नेछन्, बाँकी सबै गए ।
यो कानुन आउँदैछ । मैले बढाएर भनेको हैन । संसदबाट यो कानुन पारित हुँदैछ । त्यसैले तपाइको फरक मत राख्न पाउने कुराको लागि एक भएर लड्नुपर्छ । नेकपाले शेरबहादुर देउवाको बारेमा बोल्न पाउने र कांग्रेसले नेकपाको बारेमा भन्न पाउने कुरा यसका लागि लड्नुपर्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा सडकमा किन आएको? ज्ञानेन्द्रले इन्टरनेट, फोन काट्यो भनेर आएको होइन, बोल्न दिएको भनेर आएका होइनौं ? ज्ञानेन्द्रले कानुन मिचेर काट्यो, यसले त कानुन बनाएर काट्दैछ, बोल्ने अधिकार खोस्दैछ, तैपनि कोही बोल्न तयार छैन । थपडी बजाएर बसेको छ ।